ओली र प्रचण्डको वार्तामा के भयो? – SidhaRekha
ओली र प्रचण्डको वार्तामा के भयो?
२०७४ पुष १२, बुधबार १७:२४ December 27, 2017
पार्टी एकता र वामपन्थी सरकार गठनमा संशय पैदा भइरहेका बेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच सबै प्रक्रिया सँगसँगै अघि बढाउने सहमति भएको छ ।
स्रोतले भन्यो, ‘एकीकृत पार्टीमा आफ्नो स्थान खोजेर चलखेल गर्ने नेता दुबैतिर छन्, तिनीहरुबाट जोगिँदै पार्टी एकता हुन्छ । केपी ओलीकै नेतृत्वमा वामपन्थी सरकार पनि चाँडै गठन हुन्छ । ओली र प्रचण्ड दुवैले मधेशवादीलाई पनि सँगै लिएर जान सघन संवाद चलाउँछन् । बाहृय र आन्तरिक शक्तिहरुको चलखेलबारे दुवै नेता सचेत छन् ।’
पार्टी एकता संयोजन समितिले नै एकता प्रक्रियाका विभिन्न पक्षबारे छलफल गर्दै अघि बढ्ने सहमति भएको स्रोतले जनाएको छ । दुवै पार्टीका नेताहरुले एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता प्रक्रिया शुरु भइसकेकाले यसमा शंका गर्नुको अर्थ नहुने बताएका छन् ।
संयुक्तरुपमा गठित पार्टी एकता संयोजन समितिमा ओली र प्रचण्ड प्रमुख नेताका रुपमा छन् । त्यस्तै एमाले नेताहरु झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, बामदेव गौतम र ईश्वर पोखरेल समितिमा छन् । माओवादीबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामवहादुर थापा बादल एकता संयोजन समितिमा छन् ।
अघिल्लोनमूना बन्दै दुर्गमको लक्ष्मीपुर आधारभूत विद्यालय
पछिल्लोदुर्गामावि सिमारमा साढे ४ बर्षपछी विद्यालय व्यवस्थापन समिति